नेपाल सरकारले नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा खेलकूदलाई यसअघिका बर्षमा झै पूर्वाधार विकाशमा जोड दिने बताएको छ । यसका साथै खेलाडीलाई प्रोत्साहनका लागि पनि आगामी आर्थिक बर्षमा काम हुने बताएको छ । कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि खेलकुदलाई नआउने गरेकोमा…
गत मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद साग प्रतियोगिताका पदक विजेताहरुले केहीले पुरस्कार रकम पाइसकेका छन् । तर केहीले भने अझंै पुरस्कार रकम हाता पारिसकेका छन् । ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६…
नेप्लेज, १५ बैशाख । कराँतेबाट एशियाड पदक विजेता बिमला तामाङले नेपाली कराँते खेलाडीकाे सहयाेगमा लागि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । ३ वर्षयता अमेरिकाकाे न्यूयोर्क शहरमा बस्दै आएकी बिमलाले आर्थिक अवस्था कमजाेर रहेका प्रतिभावान नेपाली…
पुरस्कार रकम पाएपछि टमाटाले भने – ‘साइकल किन्न बा-आमाले अब ऋण खोज्न पर्दैन’
– विक्रम गिरी पाँच वर्षअघिको कुरो हो । भारतमा हुन लागेको १२औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता सागको छनोट चलिरहेको थियो । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबका हिमाल टमाटा पनि ट्रायथलन तयारी गरिरहेका थिए । मेहेनत राम्रै गरेका थिए । नभन्दै…
ओलम्पिक कमिटी बैठकमा सामाजिक दूरी कायम गरि प्रशिक्षण गराउन सुझाव!
काठमाडौं, ११ वैशाख । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पछिल्लो परिस्थीतिबारे भर्चुअल बैठक गरेको छ । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको पहलमा विहीबार मानार्थ अध्यक्ष, सल्लाकाहरु, कमिसनका अध्यक्षहरुसँग छलफल गरिएको हो । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको…
प्रतियोगिता, नतिजा र नीतिमा सफल वर्ष-२०७६
गएकाे १ वर्ष नेपाली खेलकुदका लागि स्वर्णीम समय रह्याे । प्रतियाेगिता, नतिजा र नीतिका हिसावमा याे वर्ष भएका उपलब्धीले आगामी धेरै वर्षसम्म नेपाली खेलकुदकाे दिशा निर्धारण गरेको छ । भलिबल, फुटबल, क्रिकेट र मार्सल आर्टका राष्ट्रिय तथा…
सारिएको मितिमा पनि टोकियो ओलम्पिक हुनेमा आशंका !
विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै यसै वर्ष आयोजना हुनुपर्ने टोकियो ओलम्पिक एक वर्षलाई सारिएको छ । अन्य खेलकुदका प्रतियोगिताहरु पनि धमाधम स्थगन भएका छन् । टोकियो ओलम्पिक यसै वर्ष हुनुपर्नेमा अर्को वर्ष सन् २०२१ को जुलाई २३…